बलिउड पहिलाजस्तो रहेन– शेखर कपुर « Salleri Khabar
बलिउड पहिलाजस्तो रहेन– शेखर कपुर
प्रकाशित मिति : 24 June, 2020
एजेन्सी । बलिउड विश्वका प्रख्यात फिल्म इण्डस्ट्रीमध्येको एक हो । हर साल यहाँ १८०० सयभन्दा धेरै फिल्मको निर्माण हुने गर्दछ । हर साल नयाँ कलाकारहरु फिल्म इण्डस्ट्रीमा आफ्नो करिअर बनाउँछन् । सबैलाई मनोरञ्जन दिलाउने बलिउडको क्यामेरका पछि एउटा अँध्यारो देखिएको छ । जसले बलिउडलाई झुकाएको छ ।
सुशान्तसिंह राजपूतको आत्महत्यापछि बलिउडमा पुनः एकपटक नेपोटिजमको बहस सुरु भएको छ । सुशान्तसिंहका समर्थकहरु सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट करण जोहर, सलमान खान र संजय लीली भंसाली र आदित्य चोपडाको चलचित्र बहिष्कार गर्ने बताएका छन् ।
यसै क्रममा फिल्म निर्देशक शेखर कपुरले केही कुरा बताएका छन् जसले सोच्नको लागि बाध्य बनाएको छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘बलिउड के थियो ? बलिउड यस्तो सिस्टम थियो जसमा केही मानिस हर साता सिनेमाघर प्रचार र कलाकारको एकाधिकार प्रयोग गरी १०० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउँथे । मलाइ लाग्थ्यो कि बलिउडको मतलब फिल्मको लागि थियो । यो किन मर्यो ? भाइरसले सिनेमाघरको व्यापारलाई मारिदियो ।’
‘समयसँगै बलिउडमा धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिलाजस्तो बलिउड रहेन । ’ उनले थपे ।
शेखरका अनुसार फिल्म पानी बन्द भएपछि सुशान्तसिंह निकै रोएका थिए । शेखर र सुशान्त केही वर्षदेखि यस फिल्ममा काम गरिरहेका थिए । उनलाई थाहा थियो कि सुशान्तको यो अवस्था कसले बनाएको हो भनेर । तर, उनले कसैको पनि नाम भनेनन् । शेखरले यहाँभन्दा बढी भन्नु भनेको सिस्टमलाई तल गिराउनु हो भनी प्रतिकृया दिएका छन् ।
प्रभासको चलचित्र ‘प्रभास २०’ को पोस्टर सार्वजनिक
प्रभासले सन् २००२ बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए ।
बलिउडका दिग्गज कलाकार जगदीपको निधन
जगदीपले लगभग ४०० फिल्ममा काम गरेका थिए ।
कंगना रनावतको निसानमा तापशी पन्नु
बलिउडको नेपोटिजमको मुद्यामा बोलिरहने कंगना सुशान्तसिंह राजपूतको आत्महत्यापछि जोड जोडले आवाज उठाइरहेकी छिन् ।
सन् १९७४ मा फिल्म गीता मेरा नामबाट पहिलो पटक स्वतन्त्र रुपमा कोरियोग्राफर गरेकी थिइन् ।